Tag: dhajinta martida | Martech Zone
Tag: dhajinta martida
Ama waxaa laga yaabaa xitaa hadda! Tani waa liis adag oo ka kooban 10 meelood oo diiradda la saarayo oo ay suuqyadu u baahan yihiin inay ka fekeraan. Waxaad u baahan tahay inaad ogaato halka loo qoondeeyo inta badan miisaaniyaddaada suuq-geynta, iyadoo lagu saleynayo xeeladaha macaamiishaada iyo rajadaadu ay si joogto ah ugu howlan yihiin. Taasi waa sababta La-taliyayaasha Gawaarida Gawaarida ay isku dayeen inay ka dhigaan muuqaalkan muuqaal ah mid dhammaystiran intii suurtagal ah, wax ka qabashada arrimaha ka imanaya Suuqgeynta Emailka, si loogu hoggaamiyo beddelaad, aaladaha otomatiga. 10 Saadaalinta Suuqgeynta ee 2015